Imperator: Roma inowana hombe yemahara yekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Imperator: Roma inowana hombe yemahara yekuvandudza
Iyo Swedish Paradox Interactive ichiri kurarama, kunyangwe nguva pfupi yadarika haina kutora mazita eAAA sezvataizoda kuLinux, asi pamwe chete neParadox Development Studio ivo vanoramba vachishanda kuunza nhau. Imwe yadzo ndeye hombe yemukati yekugadzirisa yemavhidhiyo zita remusoro. Mutongi: Roma, rimwe remazita anonyanya kudiwa emultipuratifomu nevateveri ve zano uye nhoroondo.
Zvese zvinhu zvave zvakadzikama zvine chekuita neImperator: Roma kusvika kusvika kweichi chitsva. Pakave nezvinhu zvidiki, asi hapana chakakosha neichi nyowani yemahara yemukati mapakeji. Uye kupfuura zvese, haisi kungowanikwa chete paWindows uye macOS, inowanikwawo kune vashandisi veGNU / Linux distros kuti vanakirwe nayo.
Kana iwe uchitoziva Imperator: Roma, iwe unozoziva kuti rudzii urwu mazita emazita. Mune ino kesi, yakavakirwa pane nhoroondo yeEurope uye nekushanduka kweHumambo hweRoma. Ndeipi nenzira, ikozvino pa50% yemutengo wayo wepakutanga pane Steam...
Asi iwe une chokwadi kuti unokatyamadzwa nazvo nhau iyo yauri kutsvaga. Muchiitiko ichocho, iyo yemahara yekuvandudza inounza:
Mutsika kusanganaKodzero dzezvematongerwo enyika, kusanganisira ugari hwemo, hwakawedzerwa kune vashoma, nokudaro vachiwedzera kugadzirwa kwavo uye kuvimbika.
Kumukira: Vapanduki ava vave mukana wekusimba pakati pematunhu akasiyana.
Vanokudzwa: Vakuru vepamusoro venharaunda, kana vanokudzwa, mumatunhu avo vanozove nezvinodiwa chaizvo uye vangangoita kutungamira kupandukira.
Zvematongerwo enyika: maRepublics ave nemapato mashoma ezvematongerwo enyika ekuvhota uye hurongwa hwacho hwanyatsonzwisiswa.
Nzira yekudzidza nhoroondo yeeurope tichitandara ...
Uye kana usina zvakakwana kune Epirus Yemukati Rongedza, iyo mune ino kesi iri yakabhadharwa DLC, iyo zvakare ine yekuvandudza senge:
Yakasarudzika chombo chombo cheEpirus
Yakasarudzika chikepe modhi yeEpirus
Yakakosha Epirus Monument: Iyo Oracle Complex yeDodona
6 cheni dzezviitiko zvine hukama nehupenyu hwaPyrrhus weEpirus, imwe neimwe iine basa nyowani rehunyanzvi.
3 yekuwedzera Epirus zviitiko zveImperator: Roma
New mumhanzi track
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Imperator: Roma inowana hombe yemahara yekuvandudza
Facebook yakamhan'arirwa "zvinonzi zvaitora data rebiometric"